Waa qormo dheer balse faa’iido xambaarsan fadlan Aqriso hadii aad waqti u heleeyso. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Waa qormo dheer balse faa’iido xambaarsan fadlan Aqriso hadii aad waqti u...
Waa qormo dheer balse faa’iido xambaarsan fadlan Aqriso hadii aad waqti u heleeyso.
Soo Dhawaynta Iyo Raadinta cadowgaada xaga Siyaasad waa astaamaha Hogaamiyaha Wacan ee hanka sare leh.
Hadad akhriso hab-dhaqanka hogaamiye walba oo magaciisu dunida wada gaaray aadanuhuna u rayaaqay, waxaa kusoo baxayo inuu ahaa mid dulqaad badan, kaadsino badan, cafis badan oo aan cuqdad darted kuwa aay is hayaan u riixin!
1: Mucaawiye RC wuxuu yiri “ruux haddaan hal tin ah aan isku qabsanno, ineeysan go’in ayaan ku dadaalaa”
Yacni xabadaa tinta ah ee aan kala jiidan Karin, anoon sii dayn ayaan isku dayaa inaan si walba u qanciyo qofka igu haysto si aaysan u go’in.
2: Ibrahim Lincoln marki la doortay waxu kusoo daray golihiisa wasiradda kuwii sidda ugu adag uga soo horjeeday oo waliba wax walba oo uu aaminsanaa liddi ku ahaa.
Sida kaliya e uu hadafkisa ku gaari karay waxay aheeyd in uu isu keeno inta eey is diiddan-yihiin, Qof waliba oo wax ka sheego iyo mid walina oo nicid u muujiyay xil, uu ogyahay inuu ku haboon yahay, ugama uusan diidi jirin inuu ka soo horjeedo.
Marka waxaa beri dhacday in mid ka mid ahaa golihiisa wasiirada u qoray waraaq dhaleecayn ah, si aan ku talagal aheeyn ayay warqaddi ugu soo baxday wargeeysyada.
Mudanihii oo yaxyaxsan ayaa isaga oo gacanta ku wado warqaddii, xafiiska ugu yimid mudane Lincoln. Inuu iscasilayo arrintaa darteed ayuu u sheegay. Niyad uma haayo akhrinteeda, akhrin maayo ogaana maayo wxa ku qoran ee halkaas ku illow oo shaqadaada wado ayuu ku yiri!
3: Lyndon Johnson isna wuxa uu ka mid yahay madaxweynayaashi Mareeykanka kuwii ugu wacnaa, wxu isna ku caan ahaa soo dhaweynta kuwa ka soo horjeedo & u daaalidda hanashada taageradooda.
Doris Goodwin ayaa tiri “waxa aan ka mid ahaa dhallinyaradi aad uga soo horjeeday duulaankii Vietnam, aniga&arday kale ayaa maqaal qornay aan kusoo jeedineeyno in musharrax kale oo la tartamo mudane Johnson la soo saaro.
Dhoowr bilood kadib ayaa la ii xushay in aan ka mid noqdo dhallinyaro ka shaqeeyn laheeyd mashruuc aqalka cad kasocday, marki warkaas soo baxay ayuu Wargeeyska The New Republic maqaalkii dib u daabacay. Waxaan yaqiinsaday in la iga ceeyrin doono mashruuca.
Layaabkse wuxu noqday, inuu mudane Johnson yiri “ii keena ha ila joogtee sanad. Haddii aan ku guuleeysan waayo waligeed qof ku guuleeystto lama helaayo.”Intu xilka hayay aya lashaqeeyay markuu dhamaystayna wxn u raacay gobalkiisii si aan ugu caawiyo qoridda xasuus-aruurintiisi.”
Maxad filaysaa inay dhici lahayd in uu shaqada ka ceeyriyo markuu maqlay ineey ku dadaashay inaan isaga la dooran?
Madax han sare leh, cafisa kan xumeya, doonta kuwa ka maqan, soo dhaweeysa kuwa aay is hayaan Allaha na siiyo!
Previous articleBeesha Caalamka oo Cadaadis xoogan saareyso Farmaajo iyo Fahad yaasii
Next articleMaamulka Galmudug Oo ka hadlay Xasuuqii loo geystay Dadkii Rayidka ahaa ee Reer Guruceel
Xoghayaha arimaha dibedda ee Maraykanka, Antony Blinken, ayaa tilmaamay in "ciribtir qowmiyadeed" uu ka socdo Galbeedka Tigray, waxaana uu sheegay in xaaladda gobolkaas...